आइतवार, जुलाई 3, 2022
अगस्ट 20, 2019 फ्रेवुअरी 14, 2020 साइन्स इन्फोटेक	2 Comments	केटीहरु, प्रेमी
पूर्व प्रेमीको ’boutमा केटीहरु के सोंच्छन् ? यस्ता छन् १० कुराहरु ! मानिसहरु भन्छन् पहिलो प्रेम सँधै विशेष हुन्छ । पहिलो प्रेम भुल्न सकिँदैन भन्ने धेरैको भनाइ हुन्छ । चाहे त्यो सफल प्रेम होस वा असफल । तर यसो भन्दैमा पहिलो प्रेममा समस्या नहुने होइन । मानिसहरु पहिलो प्रेममा विछोडको पीडा भोगे पनि जीवनभर केही कुरा जान्न चाहन्छन् । पहिलो प्रेममा परेको मान्छेको विषयमा कतिपय कुरा जान्ने चाहाना सँधै हुन्छ । त्यसैले मानिसहरु पूर्व प्रेमी वा प्रेमिकाको फेसबुक चेक गरिरहन्छन् । भलै फ्रेण्डलिष्टबाट हटिसकेको होस् । पूर्व प्रेमीका ’boutमा केटीहरु के सोंच्छन् त ? पूर्व प्रेमीको ’boutमा केटीहरु के सोंच्छन् ? यस्ता छन् १० कुराहरु ।
पछिल्लो समयमा फेसबुक नै मानिसहरुको गतिविधि थाहा पाउने माध्यम हो । त्यसैले केटीहरुले पूर्व प्रेमीको फेसबुक जाँच गरिरहन्छन् । प्रेमीले नयाँ फिचर चलायो कि चलाएन । उसले के गर्दैछ भन्ने कुरा फेसबुकबाटै थाहा पाउन चाहन्छन् केटीहरु ।
२. साथी र नातेदारको चिन्ता
केटीहरुलाई ब्रेकअप पछि केटाका नतेदार र साथीसँग भेट्दा के भन्ने के गर्ने भन्ने चिन्ता सँधै हुन्छ ।
३. फेसबुक स्ट्याटस
पूर्व प्रेमीले लेखेका फेसबुक स्ट्याटसलाई आफ्नै लागि लेखेको होला भन्ने सोंचेर केटीहरु दुःखी हुन्छन् । खासगरी ब्रेकअप हुने वित्तिकै यस्तो कुरा बढी हुन्छ ।
४. केटीसँग देख्दा गाह्रो
कुनै पनि केटीले ब्रेकअप पछि पनि आफ्नो प्रेमीसँग अरु केटी देख्न चाहन्ने । कुनै केटी देखेमा केटीको मनमा अनेक कुरा खेल्छन् र इर्स्या समेत जन्मिन्छ ।
५. केटीको फेसबुक
केटीहरुले आफ्नो पूर्व प्रेमीसँग कोही नजिकिएको देखे भने ती केटीको समेत फेसबुक प्रोफाइल लगायतका कुरा जाँच गर्छन् ।
६. केटीको ग्रुप
केटीहरुले प्रेमीसँग ब्रेकअप पछि उ अर्कै समूहमा केटीहरुसँग नजिकिएको जस्तो लाग्छ । पुराना साथी छोडेर नयाँ केटीसँग नजिकिएको ठान्छन् केटीहरु ।
केटाले दारी पालेमा पूर्व प्रेमिकालाई चित्त दुख्छ । किन दारी पालेको होला ? मेरै कारणले हो कि भन्ने उनीहरु ठान्छन् ।
ब्रेकअप पछि केटीहरुलाई केटाले लगाउने कपडाको खुव ख्याल हुन्छ । नयाँ कपडा लगाएमा उनीहरु अव ब्राण्डेड लगाउन थालेछ । वा यस्तो लगाउन थालेछ भन्ने ठान्छन् ।
९. फेसबुक लाइक
ब्रेकअप पछि पूर्व प्रेमीको फेसबुकमा धेरै फेसबुक लाइक आउँदा पनि केटीलाई इर्स्या लाग्छ । यति धेरै लाइक कसले गर्योक भनेर उनीहरु हेर्छन् । लाइक गर्ने केटीको प्रोफाइल समेत चेक गर्छन् ।
१०. अव के चासो
धेरै नै चासो दिएपछि दुःखी हुँदा केटीहरुलाई लाग्छ अव मलाई उसको के चासो । अन्तिममा उनीहरु चासो नदिने भन्दै चासो दिइरहन्छन् ।
विश्वका चर्चित ५ प्रेम प्रसँगहरु
← कपाल झर्ने समस्याको घरेलु उपचार
महिलाले आफू भन्दा बढी उमेरको पुरुष खोज्ने कारणहरु →
रोमान्टिक प्रेमी र प्रेमिकाहरुको लागि केही उपयोगी टिप्सहरु
नोभेम्बर 15, 2016 नोभेम्बर 16, 2016 साइन्स इन्फोटेक	0
2 thoughts on “पूर्व प्रेमीको ’boutमा केटीहरु के सोंच्छन् ? यस्ता छन् १० कुराहरु”
Pingback:	केटाका यी ७ कुराहरु हरेक केटीलाई मन पर्छ, जानी राखौ
Pingback:	यी चार राशी भएका पुरुषहरुले श्रीमतीलाई गर्छन् अत्यन्तै माया, जानी राखौ
पूजा गर्नुअघि पालना गर्नुपर्ने नियमहरु
गर्भपतनको अधिकार र जिम्मेवारी
शास्त्र अनुसार कुन आँखा फर्फराउँदा के हुन्छ ?
बुद्धिमान् मानिसका असल गुणहरु